Coffee, Do MeaFavor ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
2018 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ Korea Fantasy Romantic-Comedy ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … နာမည်လေးကတော့ Coffee, Do Me A Favor လို့ အမည်ရပါတယ် … 55 မိနစ်စာ အပိုင်း ၁၂ ပိုင်း ပါဝင်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကပဲ ၁၂ ပိုင်းလုံး ထုတ်လွှင့်ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ …
အဓိက Actor တွေအဖြစ် KPop Boy Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Highlight အဖွဲ့မှ Yong Jun Hyung က နာမည်ကျော် webtoon artist တယောက်အဖြစ် ပါဝင်ထားပြီး Temperature of Love ဇာတ်ကားထဲမှ ဝတုတ်မလေး Kim Min Young က လီဆောဘီ , မင်းသမီးချောလေး Chae Seo Jin က အိုဂိုအွန်း နေရာက ပါဝင်ထားပါတယ် ….
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးပြောပြရမယ်ဆိုရင် – လီဆောဘီ ဟာ ဝတုတ်မလေးတယောက်ပါ … သူမဟာ နာမည်ကျော် webtoon artist တယောက်ဖြစ်တဲ့ လင်းဟျွန်းဝူး ရဲ့ လက်အောက်မှာ လက်ထောက်အဖြစ် အလုပ်လုပ်တဲ့ သူတဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ် … သူမဟာ သူ့ဆရာဖြစ်သူ ဟင်းဟျွန်းဝူး ကို တိတ်တခိုးကြွေနေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ် … လီဆောဘီ က စိတ်သဘောထားကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ ဝတုတ်မလေးဖြစ်နေတာမို့ အများက ရှောင်ဖယ်ခြင်းကို ခံရပါတယ် …
ဒါပေမဲ့ တနေ့ ကော်ဖီသောက်မိရာကနေ ပုရိသအပေါင်း ငေးယူရလောက်တဲ့အထိ လှပတဲ့ မိန်းကလေးအသွင်ပြောင်းလဲသွားပါတယ် … အရာရာတိုင်းမှာ သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဆိုသလို သူမရဲ့ အသွင်ပြောင်းလဲမှုမှာလဲ သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ် … ထိုအရာကတော့ ကော်ဖီသောက်ပြီး သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကဖိန်းဓာတ်ကုန်သွားတဲ့အခါ ဝတုတ်မလေး လီဆောဘီ အဖြစ် ပြန်လည်ပြောင်းလဲသွားမှာပါ …
လီဆောဘီ တယောက် ကော်ဖီသောက်ပြီး လှပတဲ့ မိန်းကလေးအသွင်နဲ့ အိုဂိုအွန်း ဆိုတဲ့ နာမည်ယူပြီး သူမရဲ့ အလုပ်ကိုသွားတဲ့အခါ … crush ဖြစ်ရတဲ့ သူမရဲ့ ဆရာနဲ့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ .?
အချစ်ရေးမှာ အတွေ့အကြုံမရှိဖူးသေးတဲ့ ဆရာ လင်းဟျွန်းဝူးတယောက် လှပတဲ့ အိုဂိုအွန်း ကို မြင်ရတဲ့ အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ? လီဆောဘီ ကရော အိုဂိုအွန်း အသွင်နဲ့ ဘယ်အချိန်ထိ ဖုံးဖိထားနိုင်မလဲဆိုတာတော့ Coffee, Do Me A Favor ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးထဲမှာ ဆက်လက်ခံစားလိုက်ကြရအောင်နော် …
Rating အရ MyDramaList မှာ 7/10 နှင့် Viki မှာ 8.3/10 အသီးသီး ရရှိထားပါတယ် …
Translator : Rabbit & Maw Maw Khaing
Starring: Chae Seo-jin, Kim Min-young, Lee Tae-ri, Yong Jun-hyung,
Trailer: Coffee, Do MeaFavor ( 2018 )